Indlu yesitrato enomtsalane kwisitrato esithuleyo kwiziko elipheleleyo
Indawo yokuhlala enemifanekiso kumanqanaba amabini, embindini kodwa ezolileyo. I-Conservatory epholileyo kunye negadi encinci kunye nokwenzeka kokugcoba. Uhlala embindini kunye nethuba lokufika ngokulula eHven. Imyuziyam kunye negalari yobugcisa ibhloko kude kunye nomcu wonxweme wonke. Kananjalo zonke iintlobo zeevenkile kunye neeresityu zikufuphi nekona. Imizuzu yokufika kwelona thuba likufutshane lokuhamba ngezithuthi zikawonke-wonke ngebhasi kunye nololiwe, ukuba unemoto kukho indawo yokupaka enkulu ejikeleze ikona apho unokuma simahla iiyure ezingama-24 ngokuthe ngqo.
Njengondwendwe unayo yonke indlu enendawo yokugcina izinto kunye nentendelezo yabucala ..
Zonke izixhobo zasekhitshini zinokusetyenziswa, kukho nokufikelela kwisixhobo sokuhlamba izitya, ifriji kunye nesikhenkcisi.
Kwaye umatshini wokuhlamba kwindawo yokuhlambela unomsebenzi wokomisa, kukho nempahla yokuhlamba kwintendelezo.
IGamla Kyrkogatan ikwindawo esembindini kodwa kwisitrato esizolileyo esinokufikelela kwiipaki zesixeko kwaye yenye yezona ndawo zindala zaseSweden indawo yokupaka yasimahla yeeyure ezingama-24/48 ngemizuzu emi-3 umgama wokuhamba, izithuthi zikawonke-wonke ezilungileyo nezixineneyo, indawo yokumisa ekufutshane. imizuzu 2 ehamba umgama kulula ukufumana zombini Hven kunye Copenhagen kwaye ke bonke behlabathi.
Isoloko ifumaneka ngefowuni nange-imeyile.
Njengondwendwe, ungena kwaye uzijonge ukuba uyafuna, ndikwisiza.